Inhlambuluko Phakathi Kukamakoti Nomndeni – The Ulwazi Programme
Inhlambuluko Phakathi Kukamakoti Nomndeni
Umakoti uma eshade ngokuphelele emzini wathelwa ngenyongo akube kusavumeleka ukuthi enze noma ikanjani kangangoba ngisho nokuya kubo kudingeka acele kumyeni wakhe noma abasemzini kuqala, uma emvumela usengavakasha ekhaya. Kuyenzeka umakoti angaphatheki kahle emzini, lokho kuyinjwayelo ngoba phela zikhona izivivinyo zasemzini lapho kusuke kudinga ukuthi umakoti abekezele ukuze akwazi ukwakha umuzi.
Kuyenzeka umakoti ahlukunyezwe umkhwenyana wakhe okanye angazwani kahle nomndeni kuze kugcine sekumphoqa ukuthi ahambe abuyele kubo. Ngokwenza njalo usuke esenze iphutha emndenini kanye nasedlozini lakulowomndeni endele kuwo. Njengoba umndeni usuke umamukelile ngembuzi wathelwa nangenyongo kusuke kufanele abekezelele noma yini eyenzekayo emzini ukuthelwa ngembuzi kusuke kuwukumbika emadlozini omuzi njengelunga lomndeni. Okwenziwa umakoti ngenxa yengxabano noma yokungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nomndeni, kuyawathinta amadlozi lokho kudinge ukuthi ngosuku ayobuya ngalo enze inhlambuluko emndenini ngenxa yokuthi indlela ahambe ngayo ayibanga yinhle.
Uma umakoti esebuyela emzini kufanele aphelezelwe abazali bakhe, baphathe imbuzi yokumhlawulela ukuthi uhambile emzini engazisanga muntu ngenxa yokuthi kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nabomndeni wakwakhe. Leyombuzi abomndeni wakhe bafike bayethule emndenini wakamkhwenyana baxolise ngesenzo sengane yabo nokuthi bacele ukuthi umntwana wabo aphinde amukelwe emndenini. Abasemzini nabo bakhipha eyabo imbuzi yokumxolela umakoti wabo bese bemamukela babike nasezidalweni zakulowomuzi ukuthi umakoti usebuyile. Abasemzini bayanxusa ukuthi isimo esinjengalesi singaphinde senzeke emndenini, izimbuzi ziyahlatshwa ziphekwe bese zidliwa yimindeni yomibili kubekuhle ekhaya isimo sibuyele kwesejwayelekile.
By Zanele Shange
1 thought on “Inhlambuluko Phakathi Kukamakoti Nomndeni”
Bambalwa abantu abasaqhuba isidala.